Ny zana-pandrefesana boribory boribory boribory XZ400 dia manana savaivony reflam-be indrindra 900mm, hery manosika fatratra 400kN, tselatra 14000N · m, ary lanja milanja 11.5t.
Ny XZ400 HDD dia manana rafitra mirindra sy bika mendrika. Ny masontsivana fanatontosana teknika lehibe azy dia nahatratra ny ambaratonga mandroso anatiny. Ny ampahany lehibe sy ny singa ary ny faritra corollary dia an'ny marika malaza eto an-toerana ary manana kalitao tsara sy kalitao azo antoka, miantoka ny fahamendrehan'ny milina iray manontolo.
Endri-javatra fampidirana XZ400 HDD
1.Hydraulika fanaraha-maso pilotra, manome fampandehanana miasa mahomby sy malefaka fehezan-dalàna, kilasy voalohany marika ny singa hydraulic mba hiantohana ny fahamendrehana ny milina rafitra hydraulic.
3.Toro haingam-pandeha roa, mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha ambany rehefa mandavaka sy misintona miverina hiantohana ny fanamboarana milamina; Rehefa mamoaka ny fantsona fandavahana tsy misy enta-mavesatra, ny lohan'ny herinaratra dia afaka manafaingana ny fivezivezena, mampihena ny fotoana fanampiana ary manatsara ny fahombiazan'ny asa.
4.Semi-mandeha ho azy fandefasana sy famoahana fitaovana fandavahana fantsom-pandrefesana, mahatsapa fananganana mandeha ho azy sy mahomby, mampihena ny vidin'ny asa fanamafisana sy ny hamafin'ny asa.
5.Tohano ny filan'ny mpanjifa isan-karazany, ny masinina dia azo ampitomboina amin'ny alàlan'ny fitaovana fitantanana fantsom-pahefana mandeha ho azy, ny rafitra fiantsona mandeha ho azy, ny cab, ny rivotra misy ny rivotra, ny fanombohana mangatsiaka, ny fotaka mangatsiaka, ny fanasana fotaka, ny famonoana fotaka ary ny fitaovana hafa.
Rotary Motor / Motors Motor
Ny tubo hydraulic
Ny varingarina solika hydraulic
Manomboka ny milina XZ400 HDD rehefa miaraka amin'ny lisitry ny fonosana, ampidiro ireto antontan-taratasy teknika manaraka ireto ：
Taratasy fanamarinana / Boky Torolàlana / Fizarana vokatra Atlas / Boky fikojakojana ny motera / Boky fampiasa amin'ny paompy sy fikojakojana
Teo aloha: Fandramana fandavahana torolàlana azo alefa XZ320D
Manaraka: RIG fandavahana atsivalana XZ420E
milina fandavahana lavaka, hdd rig, milina fandavahana hdd, Rig ary atsofohy amin'ny familiana,